ဦးလန်ဘား ၏ စွန့် စားခန်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဦးလန်ဘား ၏ စွန့် စားခန်းများ
ဦးလန်ဘား ၏ စွန့် စားခန်းများ
Posted by မောင် ပေ on Sep 27, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Short Story | 8 comments
ရွာသာယာ ၏ ရွာလယ်ခေါင် လမ်းမ ကြီးပေါ် တွင် လူတစ်ယောက် အသည်းအသန် ပြေးလာသည် ။
သူ့ ပုံစံ မှာ ၊ ဆိုင်ကယ်သုံးယောက်စီးသဖြင့် ၊ မော်တော်ပီကယ် လိုက်ဖမ်းလို့အသည်းအသန်ပြေးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ် တက်ကဆီ လိုမျိုး ။
ထိုသူကား ရွာသာယာ ၏ ဆယ်အိမ်ခေါင်း မောင်နက်ခေါင် ။
ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်လေး တစ်လုံး ရှေ့ သို့ အရောက်…
“ စုံထောက်ကြီး ၊ ဗျို့ စုံထောက်ကြီး ”
ဆယ်အိမ်မှူး မောင်နက်ခေါင် တစ်ယောက် ၊ ရွာသာယာ ၏ တစ်ဦးတည်းသော ၊ တစ်ယောက်ထဲသော စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား ၏ အိမ်ပေါ် မောပန်းတကြီး တက်လိုက်သည် ။
စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား တစ်ယောက် ကို တီဗီ ရှေ့ တွင် လမုကွန်ထရိုးကြီး ကိုင်လျှက် ၊ ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်နေသည် ကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။
တွီတွီ ..ရွှီရွှီ ….ရွှီး
“ ဟ…ဘာတွေ ကြည့်နေတာတုန်း ဗျ ”
“ ဒါ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ပါဝါရိမ်းဂျား ကား လေ ကွာ…။ အခုတလော အမှုကလဲ ပါး ၊ ဘယ်သူမှ လည်း မလာကြတာနဲ့ ၊ ပျင်းပျင်းရှိ ၊ ဒီဗီဒီခွေတွေ ထိုင်ကြည့်နေတာ ၊ ဇါတ်ကားတွေ မှ အများကြီးပဲ.. မင်းလည်းကြည့်ချင် ယူသွားဦး ၊ ၄ ခွေ မှ တစ်ထောင်ပဲ ပေးရလို့၊ ပျင်းတိုင်း ခွေပဲ ဝယ်ကြည့်နေရတာ ဟ ”
“ စကားမစပ် ၊ ဟိုကား တွေ ကော မရှိဘူး လား ”
“ ဟမ်..ဘာကားတွေ ကို မေးတာတုန်းဟ ၊ မင်းဟာက ”
“ သြော်… ” ဘကြီးနဲ့ မြေး ( ဘကြီးနဲ့ မြီး ဟု အသံထွက်ပါ ) အချစ်ကြီး ” တို့ ၊ ” ၅တန်းမောင်မောင် နဲ့၇ တန်းမမ ” တို့ ကားမျိုးတွေ လေ ”
“ ဟ..ဒီကောင်တော့ ၊ ငါ ထကန်လိုက်ရလို့ ၊ ရွာထိပ်ထိ ဒလိန့် ကောက်ကွေး ရောက်သွားမယ် ၊ နင့် မေကြီးတော်ကြီး ၊ ဘယ်လို လုပ် တို့ နိုင်ငံ မှာ ၊ ဒီလို ဇါတ်လမ်းမျိုး ရှိမှာတုန်း ၊ တော်တော်…မင်းစကားသံ နဲ့ တင် ကို ငါကြောက်လာပြီ ”
“ ဟိတ်လူ..ခင်ဗျား မလဲ ၊ အိမ်ထဲမှာတင် ပါဝါရိမ်းဂျား မနေနဲ့ ဦး ၊ စာလေးဘာလေး လဲ ဖတ်ဦး ၊ ကျုပ်တို့ ဆီမှာ ၊ လိင်ကိစ္စ တွေ ကို မူလတန်း ကတည်း က သင်ပေးတော့မှာတဲ့ ဗျ ၊ အဲဒါကြောင့် တင်ကြို ဇါတ်လမ်းတွေ ဘာတွေ များ ရိုက်နေပြီလား လို့၊ မေးကြည့်တာပါ ဗျာ ၊ အခု မရှိလဲ နောက်တော့ ခင်ဗျား ကြည့်လာရပါလိမ့်မယ် …ဟဲဟဲ…”
“ အေးပါကွာ..၊ အဲဒါတွေ ရှိလာမှ ၊ ငါ ကိုယ်တိုင် တစ်ကားလောက် ဝင်သရုပ်ဆောင်ဦးမယ် …၊ ဟီးဟီး ”
“ အရေးထဲ…ကြေငြာ က ဝင်နေပြန်ပြီ ၊ ဒါနဲ့ ..စကားကောင်းနေတာနဲ့ လာရင်းကိစ္စတောင် ပြောဖို့ မေ့နေတယ် ”
“ အေးဟုတ်သားပဲ…. ၊ ပြောစမ်းပါဦး…အပြေးအလွှားနဲ့ မင်းငါ့ဆီ ရောက်လာတာ ၊ ဘာကိစ္စ လဲ ”
“ သြော်…ခင်ဗျား လိုချင်နေတဲ့ အမှု အခု ပေါ်လာပါပြီတဲ့ ဗျာ ”
စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား လည်း ၊ မြီးကောင်ပေါက်မ လေး ကို မြင်တွေ့ လိုက်ရသော လူပျိုသိုးကြီးလို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည် ။
“ ဟေ..ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာတုန်း ၊ ဘယ်မှာ တဲ့ တုန်း ၊ ဘယ်သူတွေ က ဘယ်သူ တွေ ကို ဘာတွေ ၊ ဘယ်လိုတွေ လုပ်လိုက်တာတုန်း ”
“ တယ်ရှော်တဲ့လူပါကလား ၊ အဲဒါတွေ သိနေမှတော့ ၊ ခင်ဗျားဆီ အပင်ပန်းခံ ပြီး လာပြောနေမလား …ဟင် ”
“ သြော်..ဟီးဟီး..အဲဒါလဲ ဟုတ်တာပဲနော် ၊ ကဲကဲ….သူကြီး အိမ် ကို လိုက်ခဲ့ရမှာ မလား ၊ မင်းပြန်နှင့်လိုက် ၊ ငါ ပြင်ဆင် စရာ ရှိတာလေး တွေ ပြင်ဆင် ပြီးရင် ၊ လိုက်ခဲ့လိုက်မယ် ”
“ အောင်မာ..လာသေးတယ် ၊ မသိတဲ့လူတွေ ကို သွားပြောစမ်းပါဗျာ ၊ အကြောင်းသိ အချင်းချင်း ဟိတ်ဟန် မထုတ်ချင်စမ်းပါနဲ့၊ လာလာ..ကျုပ် နဲ့ အခုချက်ချင်း လိုက်ခဲ့ ”
“ အေးပါကွာ…မင်းကလဲ ၊ ငါ က ဒီရွာရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော စုံထောက်ကျော်ကြီးနော် ၊ နဲနဲပါးပါး လေးစားသမှု တော့ ရှိပါဦး ဟ ၊ နဲနဲတော့ ဖိန့် ပါရစေ ဟ ”
“ ဘာမှ လာလုပ်မနေနဲ့ ၊ ကိုယ့်လူ ၊ ခင်ဗျား က သောက်တလွဲ အကျိုးနဲ ရှော်တဲ့ စုံထောက် ၊ အခုကိစ္စ လည်း အချိန်တန် ရင် ၊ သူ့ ဟာနဲ့ သူ အမှုမှန်ကပေါ်လာမှာပဲ ၊ သူကြီး က မကောင်းတတ်လို့ ၊ ခင်ဗျား ကို သွားခေါ် ချေ… ဆိုလို့ သာ လာခေါ် ရတာ ”
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည် ။ စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား လိုက်ခဲ့သော အမှု များ အကြောင်း ကို နဲနဲ လောက် ပြောပြရဦးမည် ။
ဟိုတလော က ၊ ဟိုဘက်ရွာ က ပန်းခြံ ထဲ မှ ပန်းတွေ ပျောက်တုန်းက ၊ ဦးလန်ဘား ကို စုံစမ်းခိုင်းသည် ။
အမှု သွားစုံစမ်းရင် ၊ ပန်းခြံပိုင်ရှင် ရှမ်းရှမ်း ကို မြင်မိသွားရာမှ ၊ အမှု မလိုက်တော့ပဲ ရှမ်းရှမ်း နားတွင်သာ အားရှိ အရေမရ အဖတ်မရ ထိုင်ပြောရင်း ၊ ငမ်းရင်း ကြူနေတော့သည် ။
နောက်ပိုင်း ရှမ်းရှမ်း တစ်ယောက် မနေနိုင်တော့ပဲ ၊ ကိုယ့်ဘာသာ လိုက်လံ စုံစမ်းတော့ မှ ၊ ရွာသာယာ ထဲ မှ ဂျမ်းဘုံ ခိုးထားသည် ကို လက်ပူးလက်ကြပ် မိသွားသည် ။
ဂျမ်းဘုံ အကြောင်း သိချင်ရင် ဒီမှာဖတ် ( http://myanmargazette.net/66534/creative-writing )
တစ်ခါကလည်း ၊ ရွာသာယာ သို့ ခပ်ငယ်ငယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ပြောင်းလာသည် ။ ဖြစ်ချင်တော့…ကောင်မလေး အရင်ဇာတိ က ဇါတ်လမ်းတွေ က ပါ ပါလာသည် ။
သို့ နှင့် စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား ကို သက်တော်စောင့် ငှားရမ်းမိရာ ၊ ဦးလန်ဘား ၏ ခေါ်တောတစ်ထောင်အား တဏှာအားကြောင့်….
ကောင်မလေး ခဗျာ…နိုင်ငံခြားပြေး ၊ ဖောက်တပ်ချုပ် သွားလုပ်ပြီး ၊ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုး သွားရှာသည် ဟူသတတ် ။
ထိုကဲ့သို့ အရည်အချင်း များ နှင့် ပြည့်စုံလွန်းသော ဦးလန်ဘား မှာ အမှု ပါးတာ ၊ မထူးဆန်း ။
ယခုလည်း သူကြီး ခဗျာ ၊ အခြားလူ ခိုင်းစရာ မရှိလို့ ရွေးလိုက်ရသည့် သဘော ။
ဆယ်အိမ်မှူး မောင်နက်ခေါင် နှင့် စုံထောက်ကြီး ဦးလန်ဘား တို့သူကြီး ဆီ သို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည် ။
သူကြီး အိမ်တွင် ၊ အပူသည် များ ၊ အမှုသည် များ ကို တွေ့ လိုက်ရတော့လေသည် ။
“ လာ…လန်ဘား ရေ ၊ ဒီက ဦးသာဝ တို့ဒေါ်မြ တို့မှာ အဖြစ်ဆန်း လေး တွေ ကြုံနေရလို့ ၊ ငါ့ဆီ လာတိုင်ပင်ကြတယ် ၊ ငါလဲ မစဉ်းစားတတ်တော့ လို့ ၊ တို့ ရွာရဲ့ တစ်ယောက်ထဲသော စုံထောက်ကြီး.. မင်းကို ခေါ်လိုက်ရတာပဲ ”
“ ဟုတ်ကဲ့…ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး ၊ အစွမ်းရှိသမျှ အသားကုန် ကြိုးစားအားထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ် ၊ ကျွန်တော် လန်ဘားဟာ ဆိုရင်… ”
ဦးလန်ဘား ၏ တစ်ထောင့်တစ်ည ကိုယ်ရည်သွေး ဇါတ်လမ်းများ ကို ကြိုမြင်သူ သူကြီး က …
“ အဟမ်း..အဟမ်း…၊ လန်ဘားရေ ၊ အကြောင်းသိတွေ အချင်းချင်း ပဲကွာ ၊ ဒီက ဦးသာဝ တို့ ဒေါ်မြ တို့ ဖြစ်ပုံလေး ကို သာ မင်းနားထောင် စဉ်းစားပါကွာ ”
ဦးလန်ဘား လည်း ၊ ဟိုက်ဝေး လမ်းမကြီးပေါ် တစ်နာရီ ကီလို ၈၀ လောက် မောင်းနေသည့် အိပ်ပက်လက် ကားကြီး ဒက်စတော့ ဘရိတ်အုပ်လိုက်သလို ၊ တွန့် သွားသည် ။
ဦးသာဝ နှင့် ဒေါ်မြ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မျက်နှာချင်း ဆိုင် ကြည့်လိုက်ကြသည် ။
သူ စပြောနိုး ၊ ကိုယ် စပြောနိုး ။
“ ကဲ…ဒေါ်မြ က အရင် စပြောလိုက်ပေါ့ ”
“ ဟုတ်ကဲ့….ဒီလို ပါရှင် ”
ရွာသာယာ မှ ဦးသာဝ နှင့် ဒေါ်မြ တို့ ၏ အဖြစ်ဆန်း ကို ၊ စုံထောက်ကျော်ကြီး ဦးလန်ဘား ၏ အထူး စုံစမ်းထောက်လှမ်း ပုံ များ ( ဇါတ်သိမ်းပိုင်း ) ကို ဆက်လက် ရေးတင်ပါမည် ။
ကိုပေကလည်း ကိုးရီးယား ဒီဇိုင်း လုပ်နေပြန်ပြီ ကောင်းခန်းရောက်ရင်ရပ်ရော
ထားပါ တရုတ်ဒီဇိုင်းမဟုတ်ရင် ပြီးရော ကောင်းပါတယ် ဆက်လက်မျှော်မည်
မေခလာ နဲ့ အတူ
ကြောင်ပလီ ကို တွေ့ 
ဆရာပေကလဲ သဲလွန်စလေးတောင်မချန်ခဲ့ဘူး။ တုံးတိကြီး။
ဦးလန်ဘား ဘယ်လောက်ရှော်..အဲ….တော်လဲ ကြည့်ရအောင်
တစ်နေ့က ကြောင်အိမ်ထဲက ငါးကြော်ပျောက်သွားလို့…
ဦးလန်ဘား အကြောင်းကို ဒီနေ့ ည မှာ အပြီးတင်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ
ပန်းပန်း ရဲ့ ကြောင်အိမ်ထဲ က
ငါးကြော် ပျောက်သွားတယ် ဆိုတော့
ငါးကြော်ကြိုက်တဲ့ ကိုကြောင်ကြီး များ
ဘီယာ နဲ့ ဗျင်းဖို့ 
ယူသွားတာလား ရော့ 
သူ က လက်သည်းခြေသည်း ရာ မကျန်အောင်
ဘကြီးနဲ့ မြေး ( ဘကြီးနဲ့ မြီး ဟု အသံထွက်ပါ ) အချစ်ကြီး ” တို့ ၊ ၅တန်းမောင်မောင် နဲ့၇ တန်းမမ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ကယ် ရှိနေပြီလား
လန်ဘား က အပြန်စား ရှာထုတ်မှာလား။